कोरोना लागिहाल्यो ? नआत्तिनुहोस् यसरी सजिलै जित्न सकिन्छ कोरोनालाई – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Health/कोरोना लागिहाल्यो ? नआत्तिनुहोस् यसरी सजिलै जित्न सकिन्छ कोरोनालाई
काठमाडौं, ३१ साउन । कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्दै गए पनि सतर्कता अपनाउँदै मनोबल उच्च बनाउन सके यसलाई जित्न सकिने चिकित्सकले बताएका छन् । चिकित्सकका अनुसार संक्रमितमध्ये सय जनामा ६७ जना निको भएर घर फर्किएका छन् ।
कुल संक्रमितलाई आधार मान्दा एक सय जनामा ६७ जना निको भएर घर फर्किएका हुन् । अन्य केही पनि सन्चो हुने क्रममा रहेकाले कोरोना संक्रमण हुनेबित्तिकै मरिन्छ कि भन्ने डर र त्रास भने लिन नहुने चिकित्सकको सुझाव छ । संक्रमित २५ हजार ५ सय ५१ मध्ये हालसम्म १७ हजार ७७ जना डिस्चार्ज भएका छन्, जुन ६६ दशमलव ८३ प्रतिशत हो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले अनावश्यक रूपमा बाहिर ननिस्किन आग्रह गरे । उनले भने, ‘घर बाहिर निस्किनै परे मास्कको सही रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ । हामी स्वयं सतर्क भयौं भने संक्रमण हुँदैन ।’राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा। रवीन्द्र पाण्डेले एकपटक निको भएका व्यक्तिबाट कोरोना संक्रमण नसर्ने भन्दै उनीहरूलाई शंका र दुव्र्यवहार गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन पोसिलो खाना खाने र व्यायाम गर्ने गरौं । जति थोरै व्यक्तिसँग भेट गर्छौं, संक्रमण सर्ने सम्भावना कम रहन्छ ।’